वडो गजबको परम्परा, संस्कार अर्थात प्रचलन – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
फुकुओका , १६ नोभेम्बर
आज म भूगोल, संस्कार र प्रचलनका कुरा गर्छु । संसारमा ठिक र बेठिक पनि नहुँदो रहेछ । हरेक समाजका आ-आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । यसैमा टेकेर आफैले ठिक/बेठिक धोषणा हुने कुरा रहेछन् । अनेकौ संस्कार र प्रचलन पनि छन् । समाजै पिच्छे मान्यताहरू फरक हुन सक्छन् । यिनै मान्यता अर्थात सिकाईहरू पुस्तान्तरण हुदै जान्छन् । वडो गजबको छ परम्परा, संस्कार अर्थात प्रचलन । हो आज म यसैको कुरा गर्छु ।
सुनामी र ताइफुन हेरी आफ्नो भूपरिवेष्ठित मूलुकको स्वाद विशेष छ । आकासमा उड्दा होस वा पानीमा तैरिदा, जमिनमा नफर्कदा सम्म मन स्थिर हुन पाउदैन । सुख, सम्पन्नताका कुरा पनि निकै सापेक्षित रहेछन् । समय, व्यक्ति र परिस्थिति उस्तै । साथीहरू, आज म अलिकति डुलाउँछु ।
सन् २०११ मा जापान आइपुग्दा भेज र ननभेज पस्कने एउटै डाडु थियो । भेजहरूले आफूलाई कतिपटक जोगाउनुपर्छ, भनीसाध्य छैन् । सन् २०१३ मा टर्की (अंकारा) पुग्दासम्म निकै भोक लागेको थियो । के-के खुवायो, थाहै भएन । एकजना सरले नुहाउनुभयो । जनै फेर्नुभयो । हाम्रो मनमा पनि लामोसमयसम्म वादल लाइरह्यो ।उनीहरूले खाएकै उत्कृष्ठ वस्तु खुवाएको हुनुपर्छ । तर संकेत काफी छ । अन्जानमा सबै माफ भयो । विदेशका कुरा विदेशसम्मै भनेर पचाइयो । सन् २०१५ मा श्रीलंकाको यात्रा जुर्यो । टिमनेता अतिविशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो । त्यो पनि विशुद्द भेजिटेरिएन । बुद्दको मन्दिर जाने कार्यक्रम थियो । चिया-खाँजाको आयोजना गरेको रहेछ । पाहुना मध्ये २ जना भेजेटेरिएन भनेपछि पुजारीको सातो उड्यो । भेजिटेरिएनले के खान्छन् ? यस्तो पो सोध्यो उँ । हामीहरू पनि रुनु न हास्नु भएका थियौं । संझदा आजपनि रमाइलो लाग्छ । सामुद्रिक खाना खानेहरूको संसार वेग्लै हुँदोरहेछ । हामी नेपाली वास्तवमै विशेष छौं ।
हाम्रो खाना पनि विशेष छ । हाम्रो शरिरबाट मसलाको विशेष महक आउछ रे । यस्तो मसालेदार स्वाद सबैलाई स्वाद पर्छ भन्ने छैन् । संसारमा सर्वथा ठिक र बेठिक भन्ने नै हुँदैन । यीनै सामाजिक मान्यताको कुरा गरिरहेछु म । हामीहरू दाल भात खान्छौ, भात खानका लागि सितन यानी तरकारी चाहिन्छ । भातको सिङ्गा डल्ला त हामीले पिण्ड चढाउछौं । एक दिन जापानी साथीले भनी, भात मुछेर खानेभए सँगै खादैन । जापानीसँग कृपया यसरी नखानु । उसको सुझावमा व्यङ्गय होइन, प्रेम थियो । उ चाहान्थी, फेरि पनि सँगोलमा खाना खान । भातमा दाल यानी तरकारी मिलाउदा हालत यो भयो । अझ, हातैले मुछेर स्वाम्म पार्ने कुरा त सोच्न पनि सकिन्न । जबकी स्वादिलो खाना चम्चाले खानु भनेको, मेरा लागि तातो पानीले तिर्खा मेटाएझै हो ।
जापानमा अलि लामो समय जसो सिक्ने मौका मिल्यो । वर्षौ बस्दाको अनुभवमा लेख्दैछु, मान्यताहरूले कति फरक पार्दोरहेछ । एक दिन पार्टीमा जान निम्ता आयो । निम्तामा पुगेर आफ्नो विल आफै तिर्नुपर्ने चलन पो रहेछ । झसंग भइयो । आयोजना गर्नेले कहिले त रकम तोकेरै निम्ता गर्ने पनि देखियो । ताकि जानेले आफ्नो बजेटबारे समयमै निर्णय लिन सकुन् । मनमा लाग्यो, निम्तालुलाई बोलाएर विल उनैलाई तिर्न लाउने । कस्तो गजब । समय ठूलो कुरा छ, जापानमा । घण्टाको सरदर ८ डलर आम्दानी छाडेर कसैको निम्तामा उपस्थित हुनु र उल्टो खर्च गर्नु चानचुने कुरा नहुने रहेछ । खासगरी कार्यक्रम आयोजना गर्न र सहभागी हुने दुवैका लागि ।
एक दिनको कुरा हो । जापानी २ मित्रहरूलाई हामीले पनि खानामा बोलायौं । उनीमध्ये एक म जस्तै सरकारी जागिरे छन् । हामीहरू सँगसँगै व्याट्मिन्टन पनि खेल्छौं । अर्का साथी मेरो छोरा अशलका भाषा शिक्षक हुन् । अ साच्ची ! जापानमा नेपाली रेस्टोरेण्टहरू मनग्ये छन् । घरमा के मिल्ला नमिल्ला । नेपाली रेस्टुरेण्टमा नै लैजानु अनुकूल भएकाले उतै जाने निर्णय गरियो । हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर उनीहरू पनि आइपुगे । रामकृष्ण श्रेष्ठलाई मेराबारेमा धेरैकुरा थाहा हुन्छ । पञ्चर भएको टायर टाल्ने कि फेर्नेसम्म कुरा उहाँलाई थाहाँ हुन्छ । उहाँलाई यहाँ पनि दु:ख दिए । जहाँ पुगे पनि र जति कुरा गरेपनि संभव भएसम्म नेपालीको साथी नेपाली नै हुन्छ ।
कुनै पनि कुराको खुलेर प्रशंसा गर्ने संस्कार छ जापानमा । नेपाली स्वादको खाना खाँदै गर्दा निकै प्रंशसा गरे उनीहरूले । एकजनाले हास्दै भने, यो मेरो पहिलो अवसर हो, नेपाली खाना चाखेको । स्वादिलो रहेछ । तर, मेरो सन्तानले यति पिरो मुखमा हाल्न सक्नेछैनन् । नेपाली खाना खान सकेकोमा बहादुरी प्रकट गर्दैथिए उनी । जापानी खानामा गुलियो मिसिए जस्तै हो हाम्रो तरकारीमा हल्का पिरो र मसला । खाना खाँदै हामी पनि भलाकुसारीमा रमायौ धेरैबेर ।
खाएपछि, विल तिर्ने कुरा भयो । नेपाली प्रचलन अनुसार निम्तालुलाई रकम नतिराउने मैले प्रस्ताव राखे । जापानी निम्तालुले आफै वील तिर्छन् भन्ने अनुभव थियो मलाई । वास्तवमा छोराको शिक्षक र साथीलाई निम्ता गर्ने त्यसमाथी आफ्नै नेपाली खाना खुवाएर फेरी पाहुनालाई नै रकम तिराउनु हाम्रो संस्कारमा कठिन कुरा थियो । यसकारण, पहिल्यै रकम तिरेको कुरा मैले सनम्र अनुरोध गरे । मेरो साथी जो सरकारी जागिरे थिए, उनले मलाई भने ।
म त सरकारी जागिरे पो त । मेरो विल हजुरले तिरिदिन कसरी मिल्छ ? निकै मुस्किलमा देखिए उनी । निकै बेर घोरिएपछि भने । सरकारी कर्मचारीले त आफ्नो विलको रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ । नत्र नराम्रो आदत पर्छ र अर्को अफिसले थाहा पाए मेरो जागिर चट् हुन्छ । यो कुरा सुनेर मेरो शरिरमा काँडा उठेँ । यस्तो उच्च नैतिकताको प्रशंगले मलाई भित्रैसम्म छोयो । एकजनाले आफ्नो रकम तिर्दा यसले पार्न सक्ने दुरगामी प्रभावले मलाई निकैबेर सोचमग्न बनायो ।
मेरो अवस्था देखेर अनुवादक रामकृष्णजीले के भयो अशोक सर ? भन्नुभयो । मलाई बेहोस पार्यो सर । म पनि त सरकारी जागिरे हुँ । कहाँ हामी, अरूको मात्रै खान जानेका र कहाँ यिनीहरू ! मलाई थाहा छैन् । मिलाउनुहोस् यार, म फुस्फुसाए । के मैले (सरकारी कर्मचारी) पनि उसले जस्तै मेरो विल आफै तिर्छु भनेर छाती फुकाउन सक्छु ? मेरो मनमा गढेको छ ।
आजकल, निम्तामा जान्छु तर धेरैजसो मेरो विल आफै तिर्छु । मेरो निम्तामा साथीहरू आउछन् । आ-आफ्नो विल तिर्न खोज्छन् । मान्यताकै कारण भित्रभित्रै म लजाइरहेको हुन्छु । नसोचेको, नपत्याएको तर यथार्थ । फरक सोच, शैली र मान्यताहरू । भेषभुषा, रहनसहन र खानपिन ।
भाषा शिक्षक, भेषभुषा, रहनसहन